Oceanhorn hita ao amin'ny App Store amin'ny fihenam-bidy lehibe | Vaovao IPhone
Oceanhorn hita ao amin'ny App Store amin'ny fihenam-bidy lehibe
Oceanhorn dia iray amin'ireo lalao izay noheverin'ny mpampiasa matetika ho Zelda an'ny iOS, raha tsy misy ny Nintendo manapa-kevitra ny handefa ity lalao ity ho an'ny ekosistia iOS, zavatra toa tsy ho ela. OceanHorn dia manana vidiny 8,99 euro mahazatra, saingy mandritra ny fotoana voafetra dia hitantsika ao amin'ny App Store amin'ny 4,99 Euros fotsiny, fihenan'ny efa ho 50%. Oceanhorn dia mampiseho amintsika tantara iray mahavariana miaraka amin'ny sary 3D manaitra miaraka amin'ny mekanika lalao izay ahitantsika hetsika sy traikefa nahafinaritra. Lafiny iray hafa misongadina amin'ity lalao ity ny feonkira, feonkira noforonin'ireo mpamorona lalao video tsara indrindra eto an-tany toa an'i Nobo Uematsu (Final Fantasy) sy Kenji Ito (Seiken Densetsu).
Mandritra ny fampandrosoana ny Oceanhorn dia tsy maintsy Jereo ny nosy any amin'ny ranomasina mbola tsy voadinika, tontolo feno loza, ankamantatra ary tsiambaratelo maro. Tsy maintsy mianatra mampiasa majika isika, miatrika biby goavambe, mahita harena taloha mba hamita tsara ny iraka ataontsika. Ny saintsika sy ny fahaizantsika dia hosedraina hamoaka ny zava-miafina ny amin'ny fanjakan'ny Arcadia taloha sy ilay biby an-dranomasina antsoina hoe Oceanhorn.
Mozikan'i Nobuo Uematsu malaza sy Kenji Ito, mozika ahafahantsika milentika amin'ny lalao.
Maherin'ny 10 ora ny lalao manaraka ny tantara mahafinaritra
Mahafehy ny kanton'ny sabatra sy majia.
Mitadiava zavatra taloha hanampy anao amin'ny fikarohanao.
Zava-bitan'ny Game Center, hahafahana mifaninana amin'ireo namantsika.
Mifanaraka amin'ny iCloud, izay ahafahantsika mampifanaraka ny fivoarantsika amin'ireo fitaovana rehetra nametrahanay ity lalao ity.
Mifanaraka amin'ny mpamily iOS 7, mety indrindra ho an'ireo mpampiasa izay manohy mampiasa fifehezana MFI hialana amin'ny fifaneraserana amin'ny efijery mba hankafizanao ity lalao ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Fampiharana iPhone » Lalao IPhone » Oceanhorn hita ao amin'ny App Store amin'ny fihenam-bidy lehibe
Apple dia namoaka beta 1 an'ny iOS 10.2.1, tvOS 10.1.1 ary macOS 10.12.3
Ny torolàlana "Use AirPods" dia azo alaina ho an'ny mpividy vaovao